विवाह गर्न नमानेपछि अभिनेत्रीमाथि चक्कु प्रहार Canada Nepal
काठमाडौं - साउथ फिल्मका चर्चित अभिनेता साईं श्रीनिवास बेल्लमकोन्डा बलिउडमा प्रबेश गरेका छन् ।
फिल्म ‘एल्लुडु सीनु’ बाट फिल्म क्षेत्रमा प्रबेश गरेका उनले हालसम्म धेरै साउथ फिल्ममा अभिनय गरिसकेका छन् ।
अब भने उनले बलिउड फिल्म पनि खेल्ने भएका छन् । उनले तलुगु फिल्म ‘छत्रपति’ को हिन्दी रिमेकमा काम गर्ने भारतिय मिडियामा बताइएको छ ।
यस फिल्मलाई एस एस राजामौली निर्देशन रहेको फिल्म ‘छत्रपति’ को हिन्दी रिमेकमा उनको अभिनय हुने चर्चाले दर्शक निकै उत्साहित भएका छन् ।
मंसिर १३, २०७७ शनिवार १९:१९:४७ बजे : प्रकाशित
# साईं श्रीनिवास
फिल्म 'पठान' मा बिना लगानी हिस्सेदार बने शाहरुख, कति पाउछन् ?
काठमाडौं बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको नयाँ फिल्म 'पठान' को पछिल्लो समय निकै चर्चा छ । फिल्म 'जीरो' पछि कुनै फिल्ममा नदेखिएका शाहरुख अब नयाँ अवतारमा फिल्म 'पठान' मा देखिदैछन् ।
शाहरुख फिल्ममा फर्कदा दर्शकहरु उनको फिल्मलाई लिएर उत्साहित छन् । भारतिय मिडियाका अनुसार यस फिल्मको उनी बिना लगानी हिस्सेदार बनेका छन् । यस फिल्ममा शाहरुखले लिने फि बाहेक फिल्मको नाफाबाट ४५ प्रतिशत लिने सहमती भएको बताइएको छ ।
यदि यस फिल्मले एक करोड कमाएमा शाहरुखले ४५ हजार पाउनेछन् । यशराज फिल्म्सले निर्माण गरेको फिल्म 'पठान'मा शाहरुखसँगै अभिनेता जोन अब्राहम र अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको पनि मूख्य अभिनय रहनेछ ।
निर्माता आदित्य चोपडाको २०० करोड लगानी रहने यस फिल्ममा दीपिकाले १५ करोड र जोन अब्राहमले २० करोड पारिश्रमिक लिने बताइएको छ ।
यस फिल्मलाई सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गर्नछन् । देशभक्ति र एक्सन हुने यस फिल्ममा शाहरुख र जोनको टक्कर हुने बताइएको छ । फिल्ममा जोनले भिलेनको भूमिका निभाउनेछन् ।
मंसिर ११, २०७७ बिहिवार २१:०४:३१ बजे : प्रकाशित
फिल्म ‘कूली नम्बर वान’को पोष्टरमा बरुणको ५ अवतार, कहिले रिलिज हुन्छ ?
काठमाडौं - बलिउड अभिनेता वरुण धावनको नयाँ फिल्म 'कुली नम्बर १' को पछिल्लो समय निकै चर्चा छ । सन् १९९५ मा प्रदर्शनमा आएको यहि नामको रिमेकलाई वरुणका पिता डेविड धवनले नै निर्देशन गरेका छन् ।
फिल्ममा वरुण धव, सारा अली खान, परेश रावल लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । यस फिल्मको ट्रेलर शनिवार रिलिज हुने वरुणले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
उनले फिल्मको पोष्टर पनि शेयर गरेका छन् । पोष्टरमा उनीसँगै सारा पनि देखिएकी छिन् । पोष्टरमा वरुणका ५ अवतार देखिएको छ ।
डेविड धवनको यो ४५ औ फिल्म 'कूली नम्बर वान' आगामी २५ डिसेम्बरमा ओटीटी प्‍लेटफर्ममार्फत प्रदर्शन हुने भएको छ । सन् १९९५ मा रिलिज भएको ‘कुली नम्बर १’ मा भने गोविन्दा र करिश्मा कपूरको अभिनय रहेको थियो ।
मंसिर ११, २०७७ बिहिवार १८:४९:२८ बजे : प्रकाशित
# कूली नम्बर वान